Author: Yojas Mezilar
Unuunka dhirtaad ka goysay, Guudkayga boqorrada Garaareeya heesaha Gallad qurux cod iyo luuq Shimbiraha u gaarka ah Gashan labada qaybood Haddii ay galaydhkiyo Galgalkiyo fadhiistaan Geesigooda caan baxay Gunta iyo salkaygana Goodaaddo nacabiyo Maska goodka halista ah Inta bahal gurguurtiyo Gungumaa ku shiri kara Waxaan ahay ma guuraan Gantadaydu adakaa Gaashaan biraan ahay Goblan tala adduunyooy Gabay jaaba-jaaba ah Jajab iyo guraangura Geel-kiiska maansada Suugaanta gocorka ah Xulka inan gumeedka ah Ninka maalin gelinkeed Moorkoos ka gurayee Garcan waayey baan ahay Alle gaarrisaniyaa Oo maxaase iga galay Intuu Gaasir ii wadey Googaalihiisii Anba ways hadaawi Markuu gooddi meershaba Garashaan ku dirayee Ninku ways galaalee Murti wax ka soo go’ay Bal aan soo godlee qabo Isagoo galgaladkii La hadlaaya gabadhii Wuxuu yidhi guddoonshuhu: Ammaaniyo qawl lahayn, Heedhee Sahraay heedhe Sirta noloshu xoog maaha Dhagar iyo suryee mahaa Surma seegto dedan maaha Sibqi iyo hunguri maaha Sacab iyo ka leef maaha Sukhrad iyo fal xumo maaha Hadba seeb u rogo maaha Salfo iyo ku faan maaha Damac iyo sandaho haddaawi Derejiyo saldano maaha Saro io dhalaal maaha Sidan iyo sidaas maaha Hadda sadadu lacag maaha Heedhee Sahraay heedhe Bulsho saami loo tuurtay Shan siyood wax loo yeelay Samir inay xigtaan maaha Surka inay dhigtaan maaha Sas inay didaan maaha Inay suudalaan maaha Sardho inay galaan maaha Hadrsawi inay dirtaan maaha Inay kala saftaan maaha Nin I sugayayow heedhe Anigoo ku sugey heedhe Maxaad ii sugtaa heedhe?
Ma waxaydin jeceshiin Inaan daasad qaatoo Ceebeeyo Filibiin? Maansadiisu waa dawan, baaq, hodan, xigmad, murti iyo qaylo dhaan xilliga argagixiso jirto. Sakaraad ma lool baa? Jiiftada gar-dhaladka ah waxan uga gol leeyahay Allahayow gurracanaa marti goor xun socotood gobannimo ku soortood kugu tidhi gun baad tahay! Rabbow dalandoolka dhow Dhalad sanaag App Page.
Hadday agaraadam tahay, Rabow dowladnimaduna kuma iman dalxiisoo doorroonayaal baa u daldaley naftoodoo dumar baa hugoodiyo dahabkii u iibshoo Doondoonisteedii dhiig baa ku daatee, Rabow dawlad curatoo ubadkeeda deeqdoo dakhrada bogsiisiyo dawa la isku baantiyo ka dhig malabka doocaan.
Abaal nagu yeelan maysid, Selelkaba hurdaa keenta Haba seexan goor baas leh Han sareedo loo waayey In saraayo loo daayo Sida aan u idhi weeye Bela saacaddeed joogta Sabti nabada haw riixin. Bal soo tiri aafadaada, Gabaywda hadduu la showro, Dhinaceed u badan tahay?
Maxaa duunyo weli nool? Xeebaha sintoodiyo Ninka Saylac joogow Sagalkiyo daruuraha Wararkaagi saaraa Xamar bay bishii soon Saxal-qaaddu keentoo Sahankaagi noo yimi Sahaydiina noo keen Xagayaga sareediyo Waa Seer-ma weydee Maxaad saaka joogtaa? Noloshaba ma dirashiyo Damqashada calooshiyo Dalqadaa ka barateen?
Kaftankaas dareenka leh Danyartaa ku heestee Dadka maanigaa baray Derejada hummaaga ah Magacyada dul-saarka ah Dorraad soo gadaal baxay Maxaa laygu digayaa? Haddaad na ilaalin weydo, Dhulka suur ku yeedh-yeedh Bulsho loo hzdraawi badi Sac sac raaca loo diid Sakaraad lawada noqooy. Hadday dabin aasan tahay, Maansada dunteediyo Waxa lagu dir-soocdaa Degelkiyo dhirteedee Heellada ma danadiyo Dibowgaa ka gurataan?
gbayada Seko adhi ma xoolaa? Haddaad liqday daacadii Xaqiiqada daahir ka ah Maxaad good mariidliyo gungumiyo abeesiyo goodaaddo jilifliyo garangoorri socotiyo inta bahal gurguurtiyo belo igaga guurteen.
Ma hayaan ulan baa!? Wax diiddo markay jirtaa Balse waxa la yaab dhalay Nin barwaaqo haystoo Ka engegan badhaadhee Bishmahaagu Caarrow Maxay kuu basaaseen Ma buskaad is-marisaa? Hoodo dagan Business Service.
Bulsho qudha la saanyadey Qaydar iyo galool iyo Qansax miidhan laga dhigay? Wuxuu Abwaanku sheegayaa inuu yahay amaba ka sii horreeyo Idaacadaha Casriga ah ee ka hadla Hirarka dhaadheer, ee qof kasta halka uu joogo Akhbaarta ugu geeya, Wuxuu Harraawi ka jawaabayaa Su’aalo fara badan, isagoo tilmaamaya sababtii magaca Hoobal loogu bixiyeyhadarawi kale oo uu tilmaamayaa, waxa ay yihiin Hiddihiisa, Hantidiisa iyo Hubkiisu iyo waxa uu mustaqbalka horumar la doonayo ummaddiisa.
Rabiyo dadkaygana danwadaag isjeceloo darjaysa qarankiyo bulsho laga dabqaatoo Carro Edeg ku dayatiyo ka dhig ul iyo diirkeed.
Hadduu yahay uur-ka-gaal,